प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्नः गोली-छर्रा बोकेका साथीहरुको राहतको लागि एजेण्डा बनाउनु भएको छ ? — onlinedabali.com
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युद्धमा घाइते भएका तथा शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेकाहरुको दुःखान्त तस्बिर प्रचण्डमा कहिल्यै नआएको बताएका छन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्दै सरकार र पार्टी नेतृत्व दुबैबाट आफूलाई हटाउने म्याराथुनमा प्रचण्ड कुँदिरहेको भन्दै ‘युद्धमा घाइते भएका, अझै पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेका साथीहरुको दु:खान्त तस्बिर आउँछ ? कहिल्यै यी साथीहरुलाई राहत र पुनस्र्थापनाको विषय एजेण्डा बनाउनु भएको छ ?’ प्रश्न गरेका छन् ।
‘एउटा कुरा स्पष्ट पारुँ, मेरा कुनै नाता सम्बन्धीहरुले कुनै नियुक्ति पाएका छैनन् । नाता सम्बन्ध भएकै कारणले मात्रै भोलि पनि पाउने छैनन् । मलाई परिवार र व्यक्तिगत लाभमा अल्झिनु छैन’, ओलीले राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा पनि प्रश्न उठाइएकोमा त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
‘म देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, देश समृद्ध बन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु । त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । यस भावनासँग सहमत नहुने, सधैभरि निराशा र कुण्ठामात्रै बोकी हिँड्ने तर कुनै नेता विशेषको नजिक भएकै कारण उसले नियुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा उचित हुन्छ र ? मलाई नातावादको निराधार आरोप लगाउनु पूर्व तपाईंले एकचोटी आफैलाई नियालेर हेर्नु भएको भए हुन्थ्यो । तपाईंले गर्नुभएको सिफारिसमा आन्दोलनमा योगदान र त्याग गरेका मान्छे परेका छन् कि अन्य ?’, ओलीले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद् या राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुभएका सबै विषय अहिले सार्वजनिक गर्दिनँ । आज मात्र होइन, भोलि पनि मबाट यस्तो काम हुने छैन’, ओलीको प्रष्टीकरण छ ।
त्यस्तै उनले सङ्घीयताका बारेमा आफ्नो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने र आफ्ना यससम्बन्धी भनाइलाई विवादित बनाउने चेष्टा भएको रहेछ भन्दै सङ्घीयता नेपालको संवैधानिक यथार्थ हो र गएको साढे दुई वर्षमा आफूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सफल पार्न दर्जनौँ कानुनहरुको निर्माण, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन तथा अन्य आवश्यक प्रबन्धको नेतृत्व गरेको बताएका छन् ।